Al-Shabaab oo weerar ku qaaday xarunta Xalane ee Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo weerar ku qaaday xarunta Xalane ee Muqdisho
March 23, 2022 Puntland Mirror Somalia 0
Muuqaal kore oo Xalane ah. [Sawir Hore]
Mauqdisho-(Puntland Mirror) Koox hubaysan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta oo Arbaco ah weerar ku qaaday xarunta Xalane oo kutaala Muqdisho, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka.
Ilaa labbo nin oo hubeysan ayaa isku dayay in ay gudaha u galaan Xalane oo xarun u ah Howlgalka Qaramada ee Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka, balse goobjoogayaal ayaa sheegay in ay arkeen ciidamo katirsan AMISOM oo dhaawac ah kuwaasoo dhulka yaala.
Weerarka ayaa sababay in si kumeel gaar ah loo hakiyo duulimaadyada garoonka Muqdisho, oo goobta weerarka lagu qaaday ay dhinaca ku hayso.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, sida ay ku sheegeen warbaahinta afkooda ku hadasha.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Wariye Cumar Siciid Maxamed oo loo yaqaan Cumar Dheere ayaa lagu xiray magaalada Boosaaso, sida ay ku warantay mareegta Horseed Media oo uu katirsanyahay. Lama yaqaan sababta loo xiray wariyaha, balse Horseed Media [...]